Daaweynta Dexamethasone ee cudurka COVID19 | Somali Health
Home Warar Daaweynta Dexamethasone ee cudurka COVID19
Daawada Dexamethasone ayaa noqotay daawadii ugu horeysay ee loo adeegsado badbaadinta nolosha dadka la xanuunsan cudurka COVID-19, sida lagu ogaaday tijaabo laga sameeyay dalka ingiriiska.
Tijaabadaan billowga ah ayaa lagu xusay in daawada dexamethasone yareyneyso dhimashada saddex meelood hal meel bukaannad ku xiran qalabka neefcaawiye ah (Ventilator) halka shan meelood hal meel ey hoos u dhigeyso dhimashada bukaannada lagu xiray qalabka Oksijiinka (oxygen).
Dhinaca kale, cilmi-baarayaasha ku lugta leh tijaabada ayaa sheegay in daawada Dexamethasone eysan caawin bukaannada leh calaamadaha fudud ee cudurka COVID19 kuwaasoo u baahnayn caawimaad xagga neefsashada. Sidaas darteed, cilmibaarayaashu waxay ku taliyeen in bulshada ka fogaadaan ka iibsashada daawada suuqyada.
Hey’adda caafimaadka adduunka ayaa soo dhaweysay natiijada tijaabadaan ee bilowga ah. “Cilmi-baarayaashu waxay nala wadaageen aragti bilow ah oo ku saabsan natiijooyinka baaritaankooda, waxaana rajeyneynaa inaan si buuxda u falanqeyno xogta maalmaha soo socda. Tani waa war aad u weyn waxaan u hambalyeynayaa dowladda Ingiriiska iyo Jaamacadda Oxford”, sidaas waxaa yiri Dr Tedros Adhanom, Agaasimaha hey’adda WHO.
Kalabar bukaannada qaba cudurka COVID19 kuwaas oo u baahan qalabka neefcawiya ah (Ventilator) ayaa geeriyooda. Haddaba, daawadaan waxay saameyn weyn ku yeelanaysaa dhimidda halistaas saddex-meelood.
Illaa iyo hadda, daawada kale ee waxtar u leh dadka qaba cudurka COVID-19 ayaa ah Remdesivir taaso soo gaabineysa maalmaha uu bukaanka ku jiro cisbitaalka. Sidoo kale, yareyneysa muddada calaamadaha cudurka laga bilaabo 15 maalmood illaa 11 balse ma cadda saameynta ku leedahay dhimidda dhimashada cudurka.
Daawada Dexamethasone ayaa ah daawo la isticmaalayay illaa sanadkii 1960dii laguna daweeyo yareynta caabuqyada, sida: kal-goys xannuunka, Xiiqda iyo cudurada ku dhaca maqaarka qaarkood. Waxyeelada dexamethasone ayaa waxaa ka mid ah; walwal, hurdo la’aan , miisaanka oo kordha, aragga oo xumaada iyo dhiigbax.
Previous articleSoomaaliya: Covid-19 saddax bil ka dib Casharro iyo Caqabad
Somali Health - June 17, 2020